Tag: normalisation garageband | Martech Zone
Tag: normalisation garageband
Nanangana studio podcast tsy mampino any Indianapolis izahay miaraka amin'ny mixer dizitaly manara-penitra sy mikrô tsara kalitaon'ny studio. Tsy manana rindrambaiko manokana anefa aho. Entiko mivantana any Garageband fotsiny ny vokatra mixer izay anoratako ny input mic tsirairay amina làlana tsy miankina. Saingy, na eo aza ny fivoahan'ny mixer-ko amin'ny alàlan'ny USB maximised, ny audio dia tsy tonga fotsiny amin'ny volume tsara. Ary ao anatin'ny Garageband dia azoko atao ny mampitombo ny volan'ny lalana tsirairay, saingy tsy manao izany aho avy eo